बेहुलीले बिदाईको बेला गरिन् यस्तो ह'र्कत, जन्तीहरुनै छक्क परे – हे'रौ रमाइलो भिडियो -
[ May 12, 2021 ] काठमाडौंको कोठामा भो’क भोकै रोएका दाजुभाईको आज यो अवस्था (भिडियो हे’र्नुहोस) समाचार
Homeसमाचारबेहुलीले बिदाईको बेला गरिन् यस्तो ह’र्कत, जन्तीहरुनै छक्क परे – हे’रौ रमाइलो भिडियो
बेहुलीले बिदाईको बेला गरिन् यस्तो ह’र्कत, जन्तीहरुनै छक्क परे – हे’रौ रमाइलो भिडियो
May 2, 2021 admin समाचार 402
हाम्रोमा बिहे दुई प्र’कारले हुन्छ। मागी र भागी। भागी व्यक्तिगत अवस्था’हरूमा भर पर्छ। म मागीको कुरा गर्छु। सुरुमा कुरा चल्छ। कुरा चलाउने अधिकांश छिमेकी या आफन्त पेरिफे’रीका मान्छे हुन्छन्। जस्लाई अरूको छोराछोरी बढेको देख्दा आफ्नै ब्ल’डपे्रसर बढे जस्तो लाग्छ।
केटाको सम्पत्तिबाट ब्रि’फिङ सुरु भएर केटाको चरित्रमा गएर पूर्णविराम लाग्छ कहिले’काहीँ अनौठा घटना हुन्छन्, जसलाई हामीले पत्याउन पनि मुस्किल हुन्छ । नेपालसँगै सिमाना जोडिएको भारतीय राज्य बिहा’रस्थित भभुआ शहरमा यस्तै एउटा रोचक घट`ना भएको छ । यो सहरमा एकजना बेहुली सुहा’गरातकै दिन बेहुलाको घरबाट सबै सामान लुटे’र फ’रार भएकी छन् ।
सुहागरातकै दिन आफ्ना नयाँ पतिको घर रि’त्याउने बेहुलीको नाम हो संगीता । उनका आमा-बाबु छैनन्, उनी एउटा ना’तेदारकहाँ बस्दै आएकी थिइन् । पीडित पक्षका अनुसार बुहारी बना’एर ल्या’इएकी युवतीले गहना र नगद तथा घरका अन्य सा’मान लिएर फरा’र भएकी हुन् ।
यो घट’ना २२ जुलाईको हो । जानका’री अनुसार शिला देवीका ४० वर्षीय छोरा पं’कज कुमारको बिहे २५ वर्षीया संगीता कुमा’रीसँग भएको थियो । दुवैको बिहे धुमधाम’सँग एउटा मन्दिरमा भएको थियो । बिहेपछि संगीता नवदु’लाहासँगै नयाँ घरमा पुगिन् । सुहा’गरातका लागि पंकज र संगीताको कोठा’लाई फूलले पनि सजा’इयो । तर लु’टेरा बेहुलीको योजना अर्कै थियो ।
उनले बहाना ब’नाएर पति’सँग सुत्न इन्कार गरेर अर्कै कोठामा सुतिन् । भो’लिपल्ट जब पंकज र उनका परिवा’रका सदस्यको निद्रा खुल्यो तब बेहुली करिब १ लाख ९० हजा’रको गहना र ३६ हजार रुपैयाँ नगद’सहित फ’रार भइ:सकेकी थिइन् ।
यो घट’ना सार्वज’निक भएपछि पंकज’को घरमा हंगामा भयो । त्यसपछि पी’डित पक्षले लमीलाई बो’लाएर फरार बेहुली उप’स्थित गराउन चे’तावनी दिएका छन् । संगीताको बिहे’का लागि लमीको काम गरेका व्यक्तिले पंकजका परिवा’रलाई फरार बेहुलीलाई २ देखि ४ दिनमा ल्याउ’ने आ’श्वासन दिएका थिए ।
तर फरार दुल’ही फिर्ता नआएपछि पीडित प:रिवारले लमी र दुलहीवि’रुद्ध पुलिसमा जाहे’री दिएका छन् । लमी पनि ती युवतीका नाते’दार भएको खुलेको छ। अहिलेसम्म बेहुली फ’रार छिन् भने पुलि’सले यो मामि’लाको जाँच गरिरहेको छ । इताजा खबरबाट
हेर्नु’होस् आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
कोरोना महा’मारीबीच यार्सागुम्बा सङ्कलन शुरु
April 3, 2021 admin समाचार 976
धुर्मुस सुन्तली फाउ’न्डेसनको ड्रिम प्रोजेक्ट गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रगंशालाको यतिखेर ३० प्रतिशत निर्माण सम्प’न्न भइसकेको छ । तर उक्त रगंशाला पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि भने आर्थिक समस्या पर्ने देखिएको छ । जसकारण रगंशाला निर्माणमा
नेपाली दिवेश पोखरेलले अमेरिकन आइडलमा दिए दमदार प्रस्तुती, तीनै जजले उठेर ताली ब’जाए (भिडिओ हे’र्नुहोस्)
April 20, 2021 admin समाचार 953
अघिल्लो वर्ष वि’जेता हुनवाट चुकेका नेपाली मुलका अमेरिकी गायक दिवेश पोखरेल ‘अर्थर गन’ फेरी प्रस्तु’ती दिन आइपुगेका छन् । दिवेशले अमेरिकन आइड’लको मञ्चमा फेरी तहल्का मच्चाएका छन् । शोमवार उनले दमदार प्रस्तुती दिएका छन्। उनको
पुण्य गौतमले कसलाई भने: खोके पनि भारत जाने टाउको दु’खे पनि भारतकै सिटामोल खाने (भिडियो सहित)
February 28, 2021 admin समाचार 1833
सधै मिडियामा छा’इरहने चिर परिचित नाम हो पुण्य गौतम । हरेक बिषयमा बोल्न प्र’खर पनि छन उनि । मिडियाले खोज्ने व्यक्ती हुन पुण्य गौतम । समाजिक अ’भियन्ता समेत रहेका पुण्य प्राय बि,बादमा पनि आइरहन्छन जानी
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (173091)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (166945)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (166575)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (166380)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (165412)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (164048)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (163576)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (162054)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (156773)
श्रीमान विदेशमा दिनरात दुःख गर्दै, यता श्रीमती आफ्नै श्रीमानको साथीसंग भागेपछि, सबैलाई रुवाउने कथा (145515)